Nyi Mu Yar: May 2009
at Saturday, May 30, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar 8 comments
မေလ တတိယပတ်မှာ အင်တာနက်ဘဏ် အသုံးပြုသူတွေ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်များက လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အထူး သတိပေးချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ လက်တလော နာမည်ကြီး စိုးရိမ်နေရတဲ့ username ၊ password နဲ့ secure PIN(One Time Pin) လျှို ့ဝှက်နံပါတ် ခိုးယူမှုတွေ ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်စက်ထဲမှာ အင်တာနက်ကို လျှောက်သွားနေရင်း ဝင်မှန်းမသိဝင်နေတဲ့ ထရိုဂျန်ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ကနေ online iBanking တခုခုကို အသုံးပြုတဲ့အခါ ပထမဆုံး username နဲ့ password ရိုက်တဲ့ စာမျက်နှာမှာ လုံခြုံရေးအရ ခလုပ်နှိပ်ပြီး ရိုက်ထဲ့ရတဲ့ securePIN နံပါတ်ကို တခါတည်း တောင်းယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
DBS က ဒီလိုမျိုးလေး မြင်သာအောင် ပြထားပါတယ်။
ဒါမျိုးဆိုလို ့က အိုင်ဘဏ်ကင်းကို လုံး၀ မဝင်ပါနဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ကို သတင်းချက်ခြင်း ပို ့ပါ။
အရေးကြီးပြီး လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက် အပြည့်အစုံ ရသွားတာနဲ့ ကုန်ပြီလို ့သာ မှတ်လိုက်ပေရော့ပဲ။ ကိုယ့်ငွေတွေကို သူတို ့လိုချင်တဲ့ဆီကို လုပ်ချင်သလို လုပ်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်သုံးနေကျ ပုံစံမဟုတ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာဆို အိုင်ဘဏ်ကင်းတွေကို မသုံးပါနဲ့။ ကိုယ်မြင်နေကြ ပုံစံတွေ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ ရပ်လိုက်ပါ။ ဘဏ်တွေကလည်း သူတို့ဖက်က ပြောင်းမယ်ဆိုရင် အစောကြီးထဲက ကြိုတင်ကြေညာထားတတ်ပါတယ်။
DBS ဘဏ်က မေလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ အထူးကြေညာချက် ကို ထုတ်ပြန်ထားပြီး အသေးစိတ်လည်း ရေးသားထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ DBS Security Alert ဖတ်ပါ။
UOB ဘဏ်ကလည်း မေလ ၂၁ ရက်နေ ့မှာ လုံခြုံရေး သတိပေးကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ UOB Security Alert ဖတ်ပါ။
DBS ကလည်း ပထမဆုံး စာမျက်နှာ မမြင်မှာစိုးလို့သေချာ သတိပေးထားပါတယ်။
Anti Virus ဆော့ဝဲလ်တွေကို အမြဲမပြတ် အဆင့်မြင့် လုံခြုံအောင် လုပ်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နောက်ပြီး သုံးစွဲသူတွေ ဖက်ကလည်း ဗဟုသုတ နဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေကို အမြဲတမ်း မျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုပါတယ်။
အခုလို နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ အရာရာတိုးတက်နေသလို၊ လူတော်တော်များများကလည်း မဟုတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ထူးချွန်တတ်လွန်းတော့ သတိထားနေကာမှ တော်ကာကြမှာကိုး။ အိုင်ဘဏ်ကင်း ဆိုတာကလည်း ခုနောက်ပိုင်း မသုံးမဖြစ်သုံးနေရတာဆိုတော့ အွန်လိုင်း ဘဏ်အကောင့် သုံးစွဲသူအပေါင်း ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီး လုံခြုံစိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းဖြင့် ....
OCBC Tips of how to safeguard from online fraud
at Wednesday, May 27, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar2comments
မေလ ၂၇ ရက်နေ့ မနက်မှာ စင်ကာပူ နိုင်ငံရဲ့ မြေအောက် ရထားလမ်းသစ် ကို စင်ကာပူ ဒုဝန်ကြီးချုပ် နဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တာဝန်ယူတားတဲ့ Teo Chee Hean က ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ လိမ္မော်ရောင် နဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဲ့ဒီ SMRT ရထားလိုင်းကို ဆိုက်ကယ်လိုင်း (စီစီအယ်လ်) လို့ခေါ်ပြီး စင်ကာပူ နိုင်ငံရဲ့ စတုတ္ထမြောက် ရထားလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖွင့်လှစ်လိုက်တာဟာ ရထားလိုင်းတခုလုံး ရဲ့ ပထမအဆင့် လမ်းပိုင်းပါပဲ။ အများပြည်သူကို မေလ ၂၈ရက် ကြာသာပတေးနေ့ မှစတင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးကာ ပြေးဆွဲပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိမ္မော်ရောင် ဆိုက်ကယ်လိုင်း ဟာ တလိုင်းလုံး မြေအောက်မှာပဲ ရှိတဲ့ ရထားလိုင်း ဖြစ်ပြီး ဘူတာပေါင်း ၂၉ ဘူတာနဲ့ အရှည် ၃၃.၃ ကီလိုမီတာ ရှည်လျှားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိုဘီဂေါက်ဘူတာ ကနေ စတင်ကာ ဟားဘားဖရန် ့ဘူတာမှာ အဆုံးသတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခု ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ပထမလမ်းပိုင်း မှာတော့ ၅ကီလိုမီတာ အရှည်နဲ့ ဘူတာ ၅ ဘူတာပဲ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ကယ်လိုင်းကို လမ်းပိုင်း ၅ ပိုင်းခွဲခြား တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်ခါ မေလ ၂၈ မှာ အများပြည်သူတွေ အတွက် စတင်ဖွင့်လှစ်မယ့် လမ်းပိုင်းဟာ အနီလိုင်းအနီး မှာ ရှိတဲ့ မေရီမောင့် ဘူတာကနေ စပြီး ဘိရှန်း၊ လိုရောင်ချွန်၊ ဆရီရန်ဂွန်း နဲ့ ဘာတလီ ဘူတာမှာ ဂိတ်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် စက်တင်ဘာလမှာ အကုန်လုံးနီးပါး ပြီးစီးမယ် လို ့မျှော်လင့်ကြောင်း LTA က ထုတ်ပြန်သွားပါတယ်။
အခုဖွင့်လှစ်တဲ့ ပထမအဆင့် လမ်းပိုင်းမှာ တရက်ကို ခရီးသည် ငါးသောင်းခွဲလောက် စီးနင်းကြမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းနဲ့ တလိုင်းလုံး ပြီးစီးပါက တရက်ကို ခရီးသည် ငါးသိန်းခန့် စီးနင်းနိုင်မယ် လို ့မျှော်လင့်ထားကြောင်းကိုလည်း SMRT က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အခုလက်ရှိ ခရမ်းရောင် လိုင်းနဲ့ ဈေးနှုန်းအတူတူ ယူထားတဲ့ လိမ္မော်ရောင် ဆိုက်ကယ်လိုင်းမှာ လည်း ခရမ်းရောင် လိုင်းက ရထားလိုမျိုး တွေကိုပဲ သုံးထားပါတယ်။ တခုထူးခြားတာက ရထားတစီးကို တွဲ သုံးတွဲပဲ ပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရထားတစီးလုံး ခရီးသည် ၉၃၁ဦး စီးနင်းလိုက်ပါနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ထိုင်ခုံ ၁၄၈ ခုံ ပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ရထားတွဲတွေကို ပြင်သစ်နိုင်ငံက Alstom Metropolis က တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ Alstom Metropolis C830 မော်ဒယ် ရထားတွေ ဖြစ်ပြီး တနာရီကို အမြန်ဆုံး ကီလို ၉၀ မောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ ရထားတွေကို ရပ်နားထိန်းသိမ်းဖို ့ရာအတွက် ကမ်ဘာ့အကြီးဆုံး မြေအောက် ရထားရပ်နား ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး စခန်း Kim Chuan Depot ကိုလည်း မတ်လ ၄ ရက်နေ့ကမှ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Kim Chuan Depot ကို စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၉၇ သန်း အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး စံညွှန်းပြည့် လုံခြုံရေး စံနစ်တွေ တပ်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒုတိယ အဆင့်အနေနဲ့ နောက်ထပ် ၆ ဘူတာ မကြာခင်မှာ ဖွင့်ဦးမယ်လို့သိရပြီး အဆိုပါဘူတာများကတော့ (Dhoby Ghaut, Bras Basah, Esplanade, Promenade, Stadium and Tai Seng) ဘူတာများဖြစ်မယ်လို့နီးစပ်သူတွေက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ လိမ္မော်ရောင် ဆိုက်ကယ်လိုင်း တလိုင်းလုံး ပြီးစီးသွားတဲ့အခါ ကမ်ဘာ့ အရှည်ဆုံးမောင်းသူမဲ့ အလိုအလျှောက်ထိန်းကျောင်း သွားတဲ့ ရထားလိုင်း အဖြစ် မှတ်တမ်း ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဧပြီလက နီးကိုလ်းဟိုင်းဝေး သာ မပြိုကျခဲ့ရင် အခုထက် စောပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ပထမ အဆင့် ကို အသုံးပြု ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် မူလ စီမံကိန်းအတိုင်း လာမယ့် နှစ်မှာ လိမ္မော်ရောင် စီစီအယ် တလိုင်းလုံးကို အပြီးသတ် ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
photos from: wiki and smrt
at Monday, May 25, 2009 Labels: MM , Technical Posted by nyimuyar0comments
at Friday, May 22, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar 8 comments
at Tuesday, May 05, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar0comments
Latest information of SwineFlu status in Singapore
WHO Phase of pandemic alert :5as of 30 Apr 09 GMT+8
Singapore Alert Status : Orange as of 30 Apr 09 GMT+8
Number of confirmed cases in Singapore :0as of4May 09 GMT+8
ALERT ORANGE: Virus becoming increasingly better adapted to humans but may not yet be fully transmissible, requiring close contact with an index case. Larger clusters appear in one or two places outside Singapore butapandemic has not yet been declared.
Situation in Singapore by Ministry of Health (Singapore)
Development of H1N1 in Singapore by Raffles Medical Group
Influenza A (H1N1) aka Swine Flu Updates www.swineflu.sg
စင်္ကာပူ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ အခြားက အချိန်နဲ့အမျှ ဖော်ပြပေးနေတဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အောက်ဆုံးက ဆွိုင်းဖလူး ဆိုဒ်ကတော့ မြေပုံလေးနဲ့ ဖော်ပြပေးပြီး အချို့ သတင်းတွေကို လည်း လင့်ခ်ပေးထားလို့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။
မည်သူမဆို ကိုယ်ခံအားကောင်းပြီး ခံနိုင်ရည်တွေ တိုးတက်နိုင်ကြပါစေလို ့
at Tuesday, May 05, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar2comments
ငါးပိ နှင့်် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန် အသိပေး ကြေညာချက်
at Sunday, May 03, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar4comments
မေလ ၁ ရက်နေ့မှာ မြန်မာ့အလင်း နဲ့ ကြေးမုံ သတင်းစာများမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနက ငါးပိ နှင့် ပတ်သက်ပြီး အများပြည်သူ တွေကို အသိပေး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သော အနီရောင် ဆိုးဆေးများ သုံးထားတဲ့ စိမ်းစားငါးပိ နှင့် အခြား ငါးပိများပါဝင်ပါတယ်။
မေလ ၁ ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ စာမျက်နှာ ၁၀ နဲ့ ကြေးမုံ သတင်းစာ စာမျက်နှာ ၇ ပါကြေညာချက် အပြည့်အစုံကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ငါးပိ နှင့်် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန် အသိပေးကြေညာချက်
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေး စစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်များကို အများပြည်သူတို့ စားသုံးနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ငါးပိရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဈေးကွက်များရှိ ငါးပိနှင့် ငါးပိထောင်းများကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာ အစားအသောက်တွင် သုံးစွဲရန် ခွင့်မပြုသော အနီရောင်ဆိုးဆေး (Rhodamine B ) ပါဝင်မှုကို တွေ့ရှိသည်။
Rhodamine B သည် ချည်၊ သိုးမွေး၊ ပိုးထည်၊ စက္ကူ၊ သားရေများကို အရောင်ဆိုးသော ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ရောဂါပိုးရှာဖွေရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ဆိုးဆေးလည်း ဖြစ်သည်။ ငါးပိများကို ဆေးဆိုးရခြင်းမှာ အညိုရောင်ငါးပိကို ပန်းရောင် အဖြစ် အမြင်လှစေရန်ဖြစ်သည်။ Rhodamine B ကို စားသုံးမိပါက အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဦးနှောက်အာရုံကြော ထိုင်းမှိုင်းခြင်း စသော လတ်တလော ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရေရှည်တွင် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်စေ ခြင်းကြောင့်၊ Rhodamine B ပါဝင်သော ငါးပိများသည် စားသုံးရန် မသင့်ကြောင်း နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ငါးပိ ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချသူများသည် အစားအသောက်တွင် သုံးစွဲရန် ခွင့်မပြုသော ဓာတုဆိုးဆေးများကို လုံး၀ အသုံးမပြုရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက အမျိုးသား အစားအသောက် ဥပဒေ ပုဒ်မ၂၈(က)အရ တရားစွဲဆို အရေးယူမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အစားအသောက်တွင် သုံးရန်ခွင့်မပြုသည့် ဆိုးဆေး Rhodamine B ပါဝင်သော စိမ်းစားငါးပိနှင့် ငါးပိထောင်း အမှတ်တံဆိပ်များ
၁။ အောင်သူဇ မြိတ်ငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၂။ ပြည့်ပြည့် မြိတ်ငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၃။ ဒေါ်အေးမြ(မြိတ်) မြိတ်စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၄။ စွမ်း မြိတ်ပုစွန်ငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၅။ ကင်းမွန် အဆင့်မြင့်စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၆။ အောင်စိုးမိုး မြိတ်စိမ်းစားပုစွန်ငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၇။ ရွှေပုစွန် ငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၈။ ကောင်းမှကောင်း မြိတ်ငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၉။ ဒေါ်သိန်းခင် မြိတ်ငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၁၀။ ပွင့်ဦး ရခိုင်ငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၁၁။ သိင်္ဂီ မြိတ်ပုစွန်ငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၁၂။ မရွှေမိုး ပုစွန်ငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၁၃။ အမေ့လက်ရာ ရွှေမြိတ်ငါးပိဖျော် ပါဝင်မှုရှိ
၁၄။ စိုး မြိတ်ငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၁၅။ ပင်ပျိုရွက်နု ပုစွန်ငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၁၆။ တုံတုံ ပုစွန်ငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၁၇။ ကျော်ခန့် ပုစွန်ငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၁၈။ ပိုင်ပိုင် ပုစွန်ငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၁၉။ ဖိုးခွားလေး ငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၂၀။ အရီးတောင်း ငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၂၁။ မီဆိုရာ မြိတ်မျှင်ငါးပိရှယ် ပါဝင်မှုရှိ
၂၂။ ရွှေမြိတ်သူ မြိတ်မျှင်ငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၂၃။ မိ ရခိုင်ငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၂၄။ ရွှေပုလဲ ကြက်သားငါးပိထောင်း ပါဝင်မှုရှိ
၂၅။ စိုးပွဲရုံ အောင်မျှင်သန့် စိမး်စားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ဝင်းမျှင် စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၂၆။ ဦးမောင်ငယ်ပွဲရုံ လင်း/၆၈၈ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
K-L ၆၇၇ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ဝင်းချို ၅၅၁ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
Top ၆၈၃ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
PK ၆၈၇ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ပိုင် ၆၈၀ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
T လင်း ၆၈၅ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
လင်းချို ၅၅၄ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၂၇။ စိန် မေတ္တာပွဲရုံ ဘိုမစိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
T စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
Top စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
Super စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
၂၈။ တိုးပွား ပွဲရုံ မြင့်စိမ်းစားငါပိ ပါဝင်မှုရှိ
လင်းချို အောက်စစိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
Super စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
လင်းချို စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ညီချိုထိုးမြိတ် စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
တိုးဇင် စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
A1 (မြိတ်) စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
မာချောင်းသား (မြိတ်)စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ဇင်ဝင်း(မြိတ်) စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
WA (မြိတ်) စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ချိုရှယ်(မြိတ်) စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ဇင်မွှေးချို(မြိတ်) စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
KKK စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
AAA စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ကောင်းကောင်းမျှင်သန့် စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ပီတိ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ထွန်းတောက် စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
နေလ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ခိုင်ဂါး စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
နီလာ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
နုချိုမွေး စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
အေတောင်း စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ချိုမွှေး စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
မြတ် စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
2K ချို စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
ဖြူရှယ် စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
မျိုး စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
(ဒေါ်ဝင်းမြင့် ပွဲရုံ) စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
အောင်လှိုင်ရွာ(စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
၃၀။ မြိတ်ပတ္တမြားပွဲရုံ စိန်နှင့်ရှေ့ဖျားစိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ဖြိုးနောက်မီး စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
မျိုးစားချို နောက်မီးစိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
၂၂ မျှင်သန်ချိုနောက်မီးစိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
၃၁။ ရွှေပြည်သစ်် ပွဲရုံ ငွေယမုံ စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ဇော်ဂါး စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
မာန် စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
သန့်ဇော် စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
ခင် စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
S မသခ စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
၃၂။ နဒီ ဧရာပွဲရုံ တနင်္သာရီတိုင်း TYW စိမ်းစားငါးပိ ပါဝင်မှုရှိ
ဧရာ၀တီသိန်း စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
ဧရာ၀တီတိုင်းကြယ်သုံးလုံးစိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
ဧရာ၀တီတိုင်းအင်တာ စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
ဧရာ၀တီတိုင်းမြောင် စိမ်းစားငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
၃၃။ ထိုက်ထိုက် ငါးပိထောင်း - ပါဝင်မှုမရှိ
၃၄။ ရှင်းသန့် ငါးပိထောင်း - ပါဝင်မှုမရှိ
၃၅။ ရွှေနဂါး မြိတ်ပုစွန်ငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
၃၆။ ဇီးချိုင် လက်ထောင်းရခိုင်မျှင်ငါးပိ - ပါဝင်မှုမရှိ
၃၇။ အင်ကြင်း ပုစွန်ငါးပိထောင်း - ပါဝင်မှုမရှိ
အမြင်ရှင်းရှင်း ကြည့်လိုလျှင် ဟိုးအောက်ဖက်နားတွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
အစားအသောက်တွင် သုံးရန်ခွင့်မပြုသည့် ဆိုးဆေး Rhodamine B ပါဝင်သော စိမ်းစားငါးပိ နှင့် ငါးပိထောင်း အမှတ်တံဆိပ်များ
စဉ် အမှတ်တံဆိပ်/လုပ်ငန်း ငါးပိအမျိုးအစား Rhodamine B
ပါဝင်မှု ရှိ Rhodamine B
excle file format link (google docs)
လက်ဖက် ပြီးတော့ အခု ငါးပိများပေါ့။ အသည်းစွဲတွေချည်းပါပဲ။
at Friday, May 01, 2009 Labels: General , MM , MyPet Posted by nyimuyar4comments
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်၊ မေလ ရဲ့ ညနေခင်းတခုမှာ အဖေက သူများမလိုချင်တဲ့ ကြောင်လေးတကောင် အိမ်ကိုခေါ်လာတယ်။ ဘာလို ့မလိုချင်တာလည်းဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း အကောင်လုံးမဲနေလို ့တဲ့။ ကိုယ်တွေကလည်း အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာတွေ အတိုင်း အနက်ရောင်ကြောင် အဖြူတစက်ကလေးမှ မပါတဲ့ကြောင် တကောင်ကို မမွေးချင်မိဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ အဖေ့ကို ဝိုင်းပြောကြသေးတယ်။
အဖေကတော့ ရှင်းပြတယ် သူ ့အိမ်က သူများသာ ပေးချင်တာ စိတ်မချဘူး။ ငါတို ့က ကြောင်လည်း ချစ်တယ်၊ အကြီးကောင်ကြီး ၀ဖီးနေတာကိုကြည့်ပြီး ဂရုလည်း စိုက်မယ်ဆိုလို့သာ ပေးလိုက်တာ ပြန်ပေးလို ့တော့ မဖြစ်ဘူးတဲ့။ အမေ ကတော့ ပြောပါတယ် အကြီးကောင်တောင် ညိုလွန်းလို့ငါမမြင်တာ သူ ့ကျရင်တော့ တက်နင်းမိမလားပဲတဲ့။
အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ကိုယ်တွေက ရှင်မွေးလွန်း အမတွေ နှိပ်စက်လို့အမ ဆိုတာ မမွေးချင်တဲ့အချိန်၊ ကြောင်ထီးလေးတွေ ကလည်း တောင်းရခက်၊ အကြီးကောင် ကလည်း ၀တုတ်နေတော့ ကြွက်မဖမ်း၊ အကြီးကောင်ကြီးနဲ့ အဖော်ရအောင် ကြောင်လေး နောက်တကောင်လောက်လည်း လိုချင်၊ ဒါနဲ့ပဲ အားလုံး တိုက်ဆိုင်သွားတော့ အဲ့ဒီ ကြောင်မဲလေးကိုပဲ မွေးလိုက်ကြတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ၂ ခါလား မသိ သူ ့အရင် အိမ်က အန်တီကြီး လာလာ ကြည့်သေးတယ်။ ကိုယ်တွေ မိသားစုက တကယ်ချစ်မှန်းသိတော့ အန်တီကြီးလည်း စိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့။
ကို်ယ်တွေ က ကြောင်ဆို သည်းသည်းလှုပ် ချစ်တတ်တာ ဆိုတော့ အမဲလေးမို့အစပိုင်းသာ ဘာညာ ဖြစ်နေတာလေ။ နောက်ပိုင်းကျတော့လည်း ချစ်သွားတာပါပဲ။ ကို်ယ်တွေ အိမ်ကလည်း ကြောင်လေး တကောင် မရှိလိုက်နဲ့ လူတိုင်းက နာမည် ပေးတော့တာပါပဲ။ ကြောင်ခမြာလည်း လူတယောက် နာမည် တမျိုးခေါ်နေတော့ ဘယ်နာမည် မှတ်ရမှန်း မသိဖြစ်မလားတောင် မပြောတတ်ပါဘူး။
သူ ့ကို အရင် အကြီးကောင်ကြီး နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် နာမည်တခုကို ရွေးပြီး ပေးလိုက်ကြတယ်။ အဖေကတော့ မဲတူးလေးတဲ့။ အမေကတော့ အကြီးကောင်ကြီးကို ကြွက်ဖြတ်ပြေးတာကို ထိုင်ကြည့်တတ်လို့ တခါတလေ ငပေါ လို ့ခေါ်တော့ အခု အမဲလေးကို ငခေါတဲ့။ ကိုယ်တွေကတော့ နာမည်အရင်းလည်း ခေါ်ရဲ့၊ အဖေ နဲ့ အမေတို ့ခေါ်တဲ့ နာမည်တွေကိုလည်း ခေါ်ရဲ့၊ စုံနေတော့တာပါပဲ။
တကယ်က ကိုယ်တွေ ကြောင်မွေးလာတဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်မှာ အမဲရောင် ဆိုလို့၂ ကောင်ပဲ မွေးဖူးတာပါ။ ပထမတကောင်က ကွပ်ပျစ်ညပ်လို ့အမြီးကောက် သွားတဲ့ တမ ဆိုတဲ့ တဲ့ ဗိုက်တပြင်လုံး ဖြူပြီး ကျန်တာ နက်နေတဲ့ ကြောင်မလေးရယ်။ အခု ကြောင်မဲလေးရယ် ပေါ့။ တကောင်လုံး မဲနက်နေတဲ့ ကြောင်ဆိုတာ အခု ကြောင်မဲလေးကျမှ စမွေးဖူးတာပါ။
ကြောင်မဲလေး ကို နင့်မှာ ဘယ်နား အဖြူပါလည်း လို့လိုက်ရှာကြသေးတယ်၊ နှုတ်ခမ်းမွေးက အစမဲနက်နေပြီး အဖြူတစက်တောင်မှ မပါဘူးလေ။ အဲ့ဒီလို မဲနက်လွနး်တဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ အမေပြောတဲ့အတိုင်း သူ ့ခမြာ ခဏခဏ တက်နင်းမိ ခံရတာတို့ တိုက်မိခံရတာတို ့ပါပဲ။ မီးပျက်တဲ့ ညတွေမှာဆို ပိုဆိုးပါတယ်။ အကြီးကောင်ကြီး ညိုညိုအရောင် တောင်မှ မမြင်ရတာ သူ ့ကျတော့ ပိုဆိုးတာ မဆန်းပါဘူး။ နောက်ပိုင်းကျတော့ သူက လည်သွားပြီ၊ ခုံအောက်တို့လူမသွားတဲ့နေရာတို ့မှာ နေတာပါပဲ။
သူ့ကို မြင်မြင်ချင်း ဘယ်သူမှ မချစ်ပေမယ့်။ တခဏအတွင်း အကြီးကောင်ကြီးရော ကိုယ်တွေရော ချစ်သွားကြတယ်။ ကြောင်မဲလေးက နဲနဲကြီးမှ ရောက်လာပေမယ့် လူတော်တော် ယဉ်တယ်။ ခဏလေးနဲ့ ရင်းနှီး သွားပြီး သူ အိမ်လို ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။ အကြီးကောင်ကြီး က ရောက်ခါစ တစိမ်းဆိုတော့ မကြိုက်ဘူး သူတို့မကြာမကြာ ရန်စောင် တတ်ကြတယ်။ ဟိုက အကောင်ကြီးကြီး၊ အမဲလေးက သေးသေး သွယ်သွယ်လေး ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ငယ်တဲ့ ကောင်က အသံအကျယ်ကြီး အော်ပြီး အသံနဲ့ ခြိမ်းခြောက်တာပေါ့ ။ ကြောင်ပေါက်စလေးသံတောင်မှ မပျောက် တတ််သေးဘူး၊
ကြောင်မဲလေးက သိပ်ကို သိမ်မွေ့ပျော့ပြောင်းပါတယ်၊ ပိန်သွယ်သွယ်လေး သိပ်လည်း မထွားဘူး အရမ်းလည်းမ၀ဘူး၊ ရောက်ပြီး ၁ လ ကျော်လောက် ရောက်မှ၊ အကြီးကောင်နဲ့ တည့်သွားတာပေါ့၊ ဟိုကောင်ကြီး အိပ်နေရင် အနား အတင်း တိုးကပ်ပြီးအိပ်တယ်။ အကြီးကောင်ကလည်း မကြိုက်ဘူး သိပ်ရီ ရတာပဲ ကလေးများကြနေတာပဲ။ နောင်တော့လည်း သဘောကောင်းတဲ့ အကြီးကောင်ကြီးက လက်ခံလိုက်တာပဲလေ။ နောက်တော့လည်း သူတို ့တွေ ချစ်ကြည်ရေးရသွားတာ အကြီးကောင်ကြီးရဲ့ ဗိုက်ပေါ်တောင် အမဲလေးက ခေါင်းဦးပြီး အိပ်တတ်သေးတာ။
အစာကွေျးတော့လည်း သူတို့ ၂ ကောင်ဟာ ကိုယ့် ပန်းကန် ကိုယ် ဘယ်တော့မှ မစားဘူး ခဏပဲ စားပြီး၊ သူများ ပန်းကန်ထဲက အစာတွေ သွားစားတော့တာပဲ သူများဟာ ပိုကောင်းတယ် မှတ်တယ် နဲ့ တူပါတယ်။ (တကယ်က တူတူကွေျးတဲ့ ဟာပဲ)။ အမေကတော့ တခါတလေ သူတို ့ကို စိတ်လို လက်ရရှိရင် အကြီးကောင်ကြီး နဲ့ အငယ်ကောင်လေး ဆိုပြီး ခေါ်တယ်လေ။ အခု အမေခေါ်တတ်တဲ့ အကြီးကောင်ကြီး နဲ့ ကြောင်မဲလေး ဆိုပြီးပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်တွေက ကြောင် ညိုကျားလေးတွေ အမွေးများတော့ အခုအမဲလေးက အကုန် ထူးဆန်းနေတော့တာပါပဲ။ ကြောင်မဲလေးတွေက အရိုးအဆစ် သွယ်တယ်၊ မတုတ်ဘူး။ ကနွဲ့ကလျှ ပိုနိုင်တယ်။ သူတို့သွယ်လျ ပုံက ပိန် တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အသားလည်း ကျစ်တယ်။ သူတို့အမွှေးက ကျစ်ပြီး တောက်နေတာပဲ။ ဆီလိုမျိုးထွက်သလား ထင်ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို ့လည်း ဆိုတော့ အကြီးကောင်ကြီး ဆိုရင် အမွေးက ဖွာတာတာရှိသလောက် သူကျတော့ ကျစ်ပြီး ပြောင်နေတာပါပဲ။ ပထမ အဖြူစပ်တဲ့ အမဲလေးတုန်း ကလည်း အဲ့သလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီတုန်းက တကောင်တလေ ဖြစ်တယ် ထင်တာ။ ခုသူ့ ကျမှ ပို သတိထားမိသွားပြီး အခြား အမဲလေးတွေကို လည်း လိုက်ကြည့်မိလို ့လေ။
တကောင်လုံး အမဲ နေတဲ့ ကြောင်မဲလေးတွေ က ဘယ်နေရာက အမဲလေးတွေ ကြည့်ကြည့် တကောင်နဲ့ တကောင် တော်တော် တူပါတယ်။ ကိုယ်လုံး သွယ်မယ် အလျှားရှည်မယ် သိပ်၀လေ့၀ထ မရှိဘူး၊ လမ်းလျှောက်တာ ညင်သာမယ်၊ လမ်းလျှောက်တာ လှပြီး စတိုင်ပိုကျသလားတောင် ထင်ရမယ််။ မျက်နှာတွေက တူတယ် သိပ်လည်းမရှည်သလို သိပ်လည်းပဲ မဝိုင်းဘူး။ သိပ်မွေ ့တယ်လို ့လည်း ဆိုနိုိင်တာကိုး၊ အပူချိန်လည်း အခြားအရောင်တွေ ထက် ပိုမြင့်ပါတယ်။
၂၀၀၅ မေလ လောက်မှာ အိမ်ရောက်တဲ့ ကြောင်မဲလေးက ၂၀၀၆ သြဂုတ်မှာ မြွေကိုက်ခံရပြီး ဆုံးသွားတယ်။ မဆုံးခင် မိုးမိပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေသေးတယ် နောက်တော့ အိမ်ပြန်မလာတာ ၂ ရက်လောက်အကြာမှာ ခေါင်းရင်း အိမ်က ဦးလေးကြီးက နင်တို ့အိမ်က ကြောင်အမဲလေး လားမသိဘူး ငါ့တို့ခြံနောက်ဖက်မှာ သေနေတယ် ဆိုတော့မှ မြွေကိုက်ခံရပြီး ဆုံးမှန်းသိရတာပါ။ မြွေပေါက်ဒဏ်ရာနဲ့ပေါ့။
အကြီးကောင်ကြီးထက် လေးနှစ်လောက် ငယ်တော့ အကြီးကောင်ကြီးထက် ကြာကြာနေရမယ်ပဲ အောက်မေ့တာ၊ ခုတော့ သူက အရင်ထွက်သွားတယ်။ သတင်း ကြားကြားခြင်းတုန်း က တော်တော်တောင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ ခဏလေး နဲ့ မြန်မြန် ၀ဠ်ကျွတ်သွားတယ် လို ့ပဲ စိတ်ဖြေရတာပါပဲ။ နောက်ရက်တွေ အကြီးကောင်ကြီးက တညောင်ညောင် အော်ရင်း လိုက်ရှာသေးတယ်ပြောလို့စိတ်မကောင်း ထပ်ဖြစ်ရသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကြောင်မဲလေး လည်း ကို်ယ်တွေ ဘဝထဲက ထွက်ခွာသွားတာပါပဲ။ သူ ့ကြောင့် သာ ကိုယ်တွေက ကြောင်မဲလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး ပိုချစ်တတ်ခဲ့တာကတော့ ငြင်းလို ့မရတဲ့ အမှန်တရား တခုဆိုတာပါပဲ။
အကြီးကောင်ကြီးရော ကြောင်မဲလေးပါ ပေးထားတဲ့ နာမည်လေးတွေ သိပ်လှတယ်၊ ဒါပေမယ့် ထုတ် မရေးဖြစ်တော့ပါဘူး။